အခမဲ့ QR Code လုပ်ပါ
အပေါ် QR ကုဒ်များ လက်ကမ်းစာစောင်များ
အပေါ် QR ကုဒ်များ ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုး
အကောင်းဆုံး QR Code Generator သည် အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ကျိုးပဲ့နေတဲ့လင့်ခ်ကိုဘယ်တော့မှစိတ်မပူပါနဲ့။ သင်၏ QR ကုဒ်များကိုနောက်မှတည်းဖြတ်ပါ၊ ပုံနှိပ်ပြီးနောက်လည်းတည်း။ ၎င်းကိုလတ်ဆတ်စွာ ထား၍ သင်၏အကြောင်းအရာအသစ်သို့လင့်ခ်အဟောင်းများကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းပါ။ ငါတို့သုံးပါ QR Code Generator & QR Code Scanner သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးပါ။ သင်၏ QR ကုဒ်များကိုမည်သူစစ်ဆေးသနည်း။ ဘယ်တော့လဲ သင်၏လင့်များအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ပုံကိုသိရန်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုလိုအပ်သည်။
စီးပွားဖြစ်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပုံစံများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်၏ QR ကုဒ်များကိုသင်လိုအပ်သည့်မည်သည့်အရွယ်အစားမဆို print ထုတ်ပါ။ EPS, PDF နှင့် SVG ဖိုင်အမျိုးအစားများမှရွေးချယ်ပါ။
ဖွဲ့စည်းပုံကိုသင်၏ QR ကုဒ်များသို့ယူဆောင်ပါ - သူတို့ကိုလွယ်ကူစွာအုပ်စုဖွဲ့နိုင်သလို tags များဖြင့်စုစည်းနိုင်သည်။ သင်၏ QR ကုဒ်များကိုအမြဲရှာရန်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းများကိုအသုံးပြုပါ။
ဘာကြောင့်အသုံးပြုရတာလဲ QR ကုဒ်များ?
QR Scanning သည်မြင့်တက်နေသည်
စစ်တမ်းတစ်ခုအရအိမ်ထောင်စု ၁၁ သန်းခန့်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံတည်း၌ QR Code ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
ဖောက်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်သင်သည် QR ကုဒ်များကိုအသုံးပြုသင့်သည် - ၎င်းတို့သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဒီဂျစ်တယ်ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်၏ဖောက်သည်များကိုအွန်လိုင်းစတိုးသို့ပို့ပါ၊ ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ရယူပါ၊ ကူပွန်များကိုကမ်းလှမ်းပါ၊ သို့မဟုတ်အီးမေးလ်များစုဆောင်းပါ။
သင်လိုအပ်သမျှ QR ကုဒ်များသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြားကွာဟချက်ကိုကျော်လွှားရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏ QR Code ကိုဖန်တီးပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုသင်ရွေးချယ်လိုက်သည့်မျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်တွင်နေရာချနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်များနှင့်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များမှသည်စီးပွားရေးကတ်များအထိ။ အသေးစား QR ကုဒ်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ၊ သူတို့အမြဲဖတ်နိုင်အောင်သေချာပါစေ။
"OMG! Pageloot ကကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်နှင့်အချိန်ကုန်သက်သာစေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုတယ်။ အဲဒါမပါဘဲဘယ်လိုစီမံရတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ "
သူ Mike HobbsTrellify မှ
လိုဂိုနှင့်အတူ QR ကုဒ်များ
သင်၏ QR ကုဒ်များအတွက်လှုပ်ရှားမှုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု (CTA) ပါသောတံဆိပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘောင်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းထည့်ပါ။ ဤသည်ကသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မြင်သာမှုနှင့်သုံးစွဲသူပြောင်းလဲမှုများကိုတိုးစေသည်။
သင်၏ QR ကုဒ်များကိုမဖြန့်ဖြူးမီ၎င်းတို့သည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်သည့်အကွာအဝေးများ၊ စမတ်ဖုန်းကင်မရာများနှင့် QR Reader အက်ပ်များကိုစမ်းကြည့်ပါ။
အမှတ်တံဆိပ်များသာရှိသောပုံမှန် QR ကုဒ်များသည်ရုပ်ဆိုးနေဆဲဖြစ်သည်။ ကုဒ်တွေကိုအမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ပါ၊
မြင့်မားသော Resolution QR ကုဒ်များ
သင်၏ QR Code ပုံနှိပ်အရည်အသွေးသည်မြင့်မားကြောင်းသေချာပါစေ။ မည်သည့်စွန့်စားမှုများကိုမျှမယူပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် QR Code vector print format (PDF, EPS or SVG) ကိုမသုံးပါနှင့်။
QR စာရင်းအင်း & လေ့လာဆန်းစစ်
အသုံးပြုမှုကိန်းဂဏန်းများရရန် Dynamic QR ကုဒ်များကိုသုံးပါ။ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကမည်သည့် QR ကုဒ်များသည်ခဲကိုပြောင်းလဲနေသည်ကိုသင်သိစေသည်။ ဤသည်ကသင်ပိုကောင်းတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကူညီပေးသည်။
မှန်ကန်သော QR Code အရွယ်အစား
QR Code ၏အနည်းဆုံးပုံနှိပ်အရွယ်အစားသည်အနည်းဆုံး ၂ x ၂ စင်တီမီတာ (3/4 x 3/4 လက်မ) ဖြစ်သည်။ သင်၏ QR ကုဒ်များကိုဖတ်နိုင်လျှင်အရွယ်အစားနှင့်အရောင်များအတွက်အမြဲတမ်းသေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။
QR Code ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
ငါတို့သုံးနိုင်တယ် အခမဲ့ QR Code Generator အက်ပ်.
သင်လုပ်ရန်မှာအထက်ပါ link ကိုနှိပ်ပြီးသင် QR Code တစ်ခုဖန်တီးလိုသော data ကိုရိုက်ပါ။
QR Code နဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကိုဒီဂျစ်တယ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ QR ကုဒ်များကိုသုံးပါ ဒေတာနှင့်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေပါ.
ဥပမာ - URL၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ SMS၊ ရိုးရိုးစာသား၊ တည်နေရာ၊ ပြက္ခဒိန်။
အဘယ်အရာက QR ကုဒ်များကိုအထူးဖြစ်စေသနည်း။
QR ကုဒ်များ အများကြီးပိုသတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်နိုင်ပါတယ် ဘားကုဒ်ထက်။
UPC ဘားကုဒ်များနှင့်မတူသည်မှာ QR ကုဒ်များသည် ၂ ဖက်မြင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ QR ကုဒ်ရှိအချက်အလက်များကိုဒေါင်လိုက်ရောအလျားလိုက်ပါသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ရှိပါတယ် အကန့်အသတ်မရှိ Pageloot နှင့်အတူ။
သင်၏ QR ကုဒ်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထာဝရအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
Static QR ကုဒ်များကဘာလဲ။
တည်ငြိမ်သော QR ကုဒ်များ link ကို သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်.
နောက်မှ link သို့မဟုတ် contents များကိုသင် ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ QR Code အသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ စာရင်းအင်းသို့မဟုတ်ခြေရာခံရွေးစရာများမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Dynamic QR Codes များကိုအမြဲအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
QR ဆိုသည်မှာ“လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှု” QR ကုဒ်များသည်မည်သည့်စကင်နမ်စက်သို့မဆိုမြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်တင်ပြရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၄ င်းတို့ကို ၁၉၉၄ တွင် Denso Wave မှ Toyota အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ ဝီကီပီးဒီးယား.
QR Code နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာaစမတ်ဖုန်းကင်မရာ.
အချို့သောစမတ်ဖုန်းများတွင် QR ကုဒ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်အတွက်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိသည်။ အချို့မှာအထူးအက်ပလီကေးရှင်းထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့အွန်လိုင်းကိုအသုံးပြုပါ QR Code Scanner အက်ပလီကေးရှင်း။
အကယ်၍ QR Code ပါအကြောင်းအရာများကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါက Dynamic QR Codes ကိုအသုံးပြုရမည်။
Pageloot ၏ QR ကုဒ်များ ဘယ်တော့မှမကုန်ဆုံးဘူး သူတို့သည်အစဉ်အမြဲအလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မည်။
Dynamic QR Codes ဆိုတာဘာလဲ။
ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အကြောင်းအရာများကိုနောက်မှတည်းဖြတ်ပါ - သူတို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးနောက်လည်း! Dynamic QR ကုဒ်များသည် URL forwarding တိုကိုအသုံးပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အသုံးပြုသူများတည်နေရာနှင့်စာရင်းဇယားများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ QR Code သည်အဘယ်ကြောင့်အလုပ်မလုပ်သနည်း။
အဲဒီမှာသေချာအောင်လုပ်ပါ လုံလောက်တဲ့ဆနျ့ကငျြဘ QR Code နှင့်နောက်ခံအရောင်များအကြား။
သင်၏ QR ကုဒ်ရှိအမှတ်တံဆိပ်ကိုဖယ်ရှားရန်သင်ကြိုးစားနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်၏ QR ကုဒ်ရှိအချက်အလက်များကိုလျှော့ချပါ။
ဘားကုဒ် နှင့် QR ကုဒ်
သင်၏ QR Code ကိုသိမ်းပါ